१ सय ९५ राष्ट्रमध्ये कति देशमा काम गर्नका लागि जान खुला ? « Khoj Raftar
१ सय ९५ राष्ट्रमध्ये कति देशमा काम गर्नका लागि जान खुला ?
१६ फागुन । वैदेशिक रोजगारका लागि विश्वको कुन कुन देशमा काम गर्न जान पाइन्छ होला भन्ने धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ । वल्र्ड मिटरका अनुसार हाल विश्वमा १ सय ९५ वटा राष्ट्र छन् जसमध्ये १ सय ८ देशमा वैदेशिक रोजागारमा जानका लागि सरकारले स्विकृति दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल नेपाल सरकारबाट संस्थागत रुपमा बैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिकलाई यी देशहरुमा खुला गरिएका छन् ।
अल्बेनिया, अल्जेरिया, अर्जेन्टिना, अर्मेनिया, अष्ट्रेलिया, अष्ट्रिया, अजरवैजान, बहराईन, बंगलादेश, बेलारुस, बेल्जियम, बोलिभिया, बोस्निया हर्ज, ब्राजिल, ब्रुनेई, बुल्गेरिया, क्यानडा, चिली, चीन, कोलम्बिया, कंगो, कोस्टारिका, क्रोएसिया, क्यूवा, साइप्रस, चेक रिपब्लिका, डेनमार्क, इजिप्ट, इष्टोनिया, फिजी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, ग्रिस, ग्वाना, होलिसी, हङकङ, हंगेरी, आइसल्यान्ड, इन्डोनेसिया, इरान, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटाली, जापान, जोर्डन, काज्कास्तान, केन्या, कोसोभो, कुवेत, लाओस, लाटभिया, लेबनान, लक्जमबर्ग, मकाउ, मलेसिया, माल्दिभ्स, माल्टा, मेसेडोनिया, मेक्सिको, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोरिचियस, मोरोक्को, मोजाम्बिक, म्यानमार, नेदरल्यान्ड, न्युजील्यान्ड, निकारग्वा, नाइजेरिया, नर्वे, ओमान, पाकिस्तान, पाङमा, पेरु, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, कतार, दक्षिण कोरिया, दक्षिण स्लोभाक, रुमेनिया, रसिया, साइपन, साउदी अरब, सिंगापुर, स्लोभानिया, साउथ अफ्रिका, स्पेन, श्रीलंकता, स्वीडेन, स्विट्जरल्यान्ड, साइकिलिज, तान्जानिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, ट्युनेसिया, टर्की, युगान्डा, युक्रेन, युएइ, अमेरिका, उज्वेस्तान, भेनेजुएला, भियतनाम, जाम्बिया ।
विभागका अनुसार यसअघि वैदेशिक रोजगार जान अनुमति दिइएका तीन राष्ट्रहरुमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जसअन्तर्गत अफगानिस्तान, इराक, लिब्या रहेका छन् । इराकमा २०६१ भदौ १२ गते इराकमा १२ जना नेपालीलाई त्यहाँका विद्रोहीहरुले निर्मम हत्या गरेपछि हालसम्म त्यस देशमा श्रमिक जानका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।